Masuuliyiinta Sadexda Xisbi Qaran Iyo Komishanka Doorashooyinka Oo Soo Saaray Heshiis Wax ka Bedelaya Mudo Kordhintii Golaha Guurtidu Sameeyeen | Araweelo News Network (Archive) -
Masuuliyiinta Sadexda Xisbi Qaran Iyo Komishanka Doorashooyinka Oo Soo Saaray Heshiis Wax ka Bedelaya Mudo Kordhintii Golaha Guurtidu Sameeyeen
Hargeysa(ANN) Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland iyo Sadexda xisbi qaran ayaa maanta qalinka ku duugay heshiis ka kooban laba qodob oo ay kasoo saareen maaraynta iyo xal u helida arimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka, Guurtida iyo wakiilada.
Qodobada ay masuuliyiinta sadexda xisbi iyo komishanka qaranku gaadheen waxaa ka mid ah in doorashooyinka Goleyaasha deegaanka iyo Wakiiladda mar la wada qabto.
Heshiiskan Komishanka iyo xisbiyada siyaasada ayaa soo baxay maalin ka dib markii aqalka Odayaashu ay muddo kordhin dheer u sameeyeen Goleyaasha deegaanka, Wakiilada, isla markaana ay iyaguna korodhsadeen mudada xilkooda. Qoraalka dhinacyadu ku heshiiyeen ayaan lagu xusin doorashada golaha guurtida iyo xiliga la qaban karo, iyadoo uu qoraalkani wax weyn ka bedelayo muda kordhinta ay shalay soo saareen golaha guurtidu.
Qoraalka ay dhinacyadu soo wada saareen ee heshiiska arrimaha doorashada waxa xisbiga KULMIYE u saxeexay Guddoomiyaha Xisbiga, Muuse Biixi Cabdi, Halka Xisbiga UDUB uu u saxeexay Guddoomiye Ku xigeenka xisbiga Axmed Yuusuf Yaasiin, iyadoo xisbiga UCID uu heshiiska u saxeexay Guddoomiyaha xisbiga, Faysal Cali Waraabe, Komishanka Doorashooyinkana waxa u saxeexay Guddoomiyaha gudida doorashooyinka qaranka, Ciise Yuusuf (Xamari).
Qoraalka heshiiskaa ayaa u dhignaa sidan:-
“Waxa maanta oo taariikhdu tahay 08.09.2010 shir ku yeeshay xarunta dhexe ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka saddexda xisbi qaran iyo xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, shirkaa oo daba socday shirar dhowr ah oo is daba socday oo uu ugu horreeyey shir ay 29.08.2010 ku yeesheen guriga uu degan yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Shirkaa oo nuxurkiisu ahaa sidii looga tashan lahaa Doorashooyinka Golayaasha Jamhuuriyadda Somaliland oo qaarkood xilligoodii doorasho ay muddo dhaaftay, kuwa kalena ay hada gabagabo yihiin, shirkaa oo uu guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa goob-joog ka ahaa qaar ka mid ah madaxda labada shirguddoon, madaxda saddexda xisbi qaran iyo Komishanka Qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Shirkaas oo lagu guddoonsaday inay saddexda xisbi qaran iyo komishanka qaranku ay ka soo talo-bixiyaan sidii hawlahaa doorashooyinka iyo kuwa kale oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka wadajir wax looga qaban lahaa.
Haddaba, shirkaas 08.09.2010 lagu qabtay xarunta komishanka doorashooyinka qaranka oo lagu lafagurayey qodobo dhowr ah, taas oo qodob qodob looga dooday, iyadoo la tixgelinayo duruufaha inagu gadaaman xag kasta oo ah, waxa lagu gaadhay.
In saddexda xisbi qaran isku waafaqsan yihiin talo bixintii komishanka doorashooyinka Qaranku usoo jeediyeen Madaxweynaha ee qoraalkii tixraaciisu ahaa KDQ/XK/150/2010.
1. In Doorashada Golayaasha Degaanka iyo Wakiillada lagu qaban karo ugu danbayn December 2011.
2. Waxa kale oo Komishanka doorashooyinka Qaranka iyo saddexda xisbi qaran isku raaceen in doorashada golaha Degaanka iyo Wakiillada hal mar la wada qabto.”